fanontaniana Ultimate FSX
1 taona 9 volana lasa izay #665 by jimidget
I manana Dell izay 5 taona. Rehefa nividy azy, ny olona izay nivarotra azy nilaza fa nanana sary karatra izay tsara amin'ny FSX. Tsy. I nividy karatra lahatsary manana lafiny roa izay nanao azy tsara kokoa fa tsy toy ny tiako.
Fotoana mba hividy biraonao vaovao. Tiako ny tsara indrindra azo atao lahatsary karatra ary Rama azo atao. ny olana dia ny fetra dia $ 500. Ny amin'ilay efa nanao hoe: Tsy mila ny fonosana, izany hoe, Monitor, fitendry sy ny voalavo. Azoko rehetra izany. Mila fotsiny aho tilikambo.
Raha ny marina, dia tsy fantatro tsara izay ilaiko. Aho ho milalao lalao, tsy ho any amin'ny ara-teknika lafiny ordinatera, fa ho tia izay fanampiana izay afaka hanome ahy.
1 taona 9 volana lasa izay #682 by joshrssmith
Angamba hahazo GTX 1050 8gb Ti sy ondrilahy ary im tsy azo antoka ny zavatra hafa toy ny CPU. miala tsiny fa tsy fantatro maro izay latsaky ny $ 500 rehetra miara-
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: jimidget
1 taona 8 volana lasa izay #704 by jimidget
Misaotra ny vaovao
1 taona 8 volana lasa izay #705 by amberdog1
Jim fotsiny Info, FSX dia tena miankina amin'ny ny processeur, ny lehibe kokoa ny tsara kokoa. Raha manana 1gb Graphics karatra ho tsara ianao. Aho fahazoan-dalana mankany tsara i5 na i7 7th Gem processeur. Manantena manampy ... AD
1 taona 8 volana lasa izay #706 by JanneAir15
Fa raha hoy FSX farany ve ianao hoe ianao koa mahazo payware addons. Satria ry zareo tsara tsara kokoa (matetika) dia mila sary tsara kokoa karatra. Afaka mamaly izany alohan'ny fahazoan-dalana zavatra? Ary raha hoy amberdog1 tsara CPU dia tsy maintsy, raha tianao fampisehoana tsara.
1 taona 8 volana lasa izay #719 by jimidget
Misaotra anao amin'ny vaovao. BTW, izaho dia misotro ronono ho an'ny vola miditra. Nijery Ebay aho noho ny milina iray mba handefa ny dikan-teny feno an'ny FSX.
Raha mahazo vintana ianao, azonao atao ve ny mijery ny Ebay ary manampy ahy hahita iray.
1 taona 6 volana lasa izay #786 by superskullmaster
jimidget nanoratra hoe: Misaotra ny vaovao. BTW, izaho dia misotro ronono ho an'ny vola miditra. Nijery Ebay aho noho ny milina iray mba handefa ny dikan-teny feno an'ny FSX.
Ny fivarotana dia mifarana amin'ny andro 3. $ 539.99 tsaratsara kokoa.
1 taona 6 volana lasa izay #789 by xHobbit420x
Nandany $ 300 teo amin'ny finday iray ny solosaina finday iray aho ary nividy tsara.
Ampidinin'ny graphics chip (izay hajaina rehefa mahazo ny vola aho)
Afaka manao izany ianao, ary mandany ny $ 200 hafa amin'ny profesora manampy amin'ny sehatra.
tahaka an'i MegaEarthScenery. mandalo amin'ny fanjakana. manomboka amin'ny faritra misy anao.
1 taona 5 volana lasa izay #820 by sylvantino
Tiako ny miditra sy manitsy io fomba fijery io fa ny hany zavatra tena ilain'ny processeur. Tiako ny hanasongadina zavatra sasantsasany izay tokony hodinihina rehefa manamboatra rigidin'ny fampiasana FSX na P3D.
1. FSX sy P3D alohan'ny V4 izay bitika 64, dia manana olana maro amin'ny zavatra mitovy. Ireo no VAS, OOM ary Blurries.
2. Ny SSD dia tsy hamaha ny olana sy ny fahatsiarovan-tena. Ary tsy hamaha ny fananganana DX 10 Preview.
3 Afaka manana ilay processeur haingana indrindra eto an-tany ianao, saingy tsy hanamboatra ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony.
Ny habetsaky ny fahatsiarovana amin'ny karatra graphics sy ny fahaiza-manaony dia tena zava-dehibe. Arakaraky ny fahatsiarovana ny karatra, ny tsy dia mampihetsi-po anao ny hahatongavanao.
Dia misy ny DX10 fixer, izay mianiana amin'ny sasany sy ny hafa dia tsy manohina ny DX10 maniry ny hitoetra ao amin'ny DX9.0c efa antiqué ka noho izany dia manana olana kely izy ireo, nefa miaraka amin'ny DX9.0c dia mbola misy fotoana lehibe kokoa VAS sy OOM.
Izany ny zava-misy momba ny FSX sy ny zava-misy izay niaraka taminay nandritra ny 10 taona, dia manosika tsy tapaka ny milina misy anay izy io mba hahafahantsika mahazo azy io araka izay tratrantsika izay tsy dia ampy velively. Ny tricks dia manana processeur mendrika, indrindra ho an'ny skylake i7 7600 (6700k dia mpanamboatra ny processeur ary ela kokoa noho ny tena i7 6700 amin'ny ampahany sasany (ny processor iray izay k rehefa vita ny fanorenana azy ary maika) , mandeha amin'ny atiny 1060 / 1080 8-16GB farafaharatsiny amin'ny tsiambaratelon'ny karatry ny grafika. (tsidiho ny tranonkala p3d ary jereo ny fepetra takian'izy ireo, fa izy ireo dia biby iray mitovy amin'ny an'ny interface hafa unil v4) satria ny XSUMX bit dia ny FSX Ny fampiasana finday hafa (quad, adinoy ny zavatra hafa, ny vidiny azonao nividianana azy ankehitriny) ary ny karatra ho an'ny tahirin-tsarimihetsika avo lenta. Nvidia Grapics dia be dia be no nandresy Graphics ady amin'ny amd amin'ny taona 32 mahadiso.
Amin'izao fotoana izao dia misy tsy fahampiana fahatsiarovana, noho izany ny fividianana karatra grafika vaovao miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena ampy mba hanesorana ireo olana amin'ny VAS dia tsy ho mora, hijanonako hatramin'ny taom-baovao, ary hijery hoe aiza no mividy grafika karatra (tsy tiako ny handanilany $ 500, mitazà ka vonjeo ary mividy karatra be dia be miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena maro, ho an'ny zotra rehetra ny tena zava-dehibe !, mety ho làlana handehanana ny processeur mendrika avy amin'ny serasera i7 ).
Fotoana mamorona pejy: 0.249 segondra